ဟီလာရီ၏သန်းခေါင်စာရင်းချီတက်ပွဲ - ရွေးကောက်ပွဲများမဖွင့်မီနောက်ဆုံးပြပွဲ - နှုန်းထားများ
ဟီလာရီကလင်တန်သည်သူမ၏ ၂၀၁၆ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလမ်းကြောင်းကိုမြောက်ကိုရီးယား၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတအဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူသည်သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူမြောက်ပြည်နယ် NC တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်းရှိ Reynolds coliseum တွင်ကြယ်ပွင့်ပါဝါများဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ Lady Gaga နှင့် Bon Jovi တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအပြီးတွင်ဟီလာရီသည်မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်အငြင်းပွားနေသောစစ်မြေပြင်၌ကျောင်းသားများထွက်ခွာရန်နှင့်မဲပေးရန်နောက်ဆုံးတောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မြောက်ကာရိုလိုင်းနားအနိုင်ရတာပေါ့, ငါတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတာပေါ့? ကလင်တန်စိတ်အားထက်သန်စွာစတင်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏မဲလိုအပ်ပါတယ်သင်၏အကူအညီလိုအပ်!
ယခင်ပထမ ဦး ဆုံးသမ္မတကတော်အတွေ့အကြုံနှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာစိတ်ထားသူ၏မရှိခြင်းမီးမောင်းထိုးပြ, သန်းခေါင်စာရင်းဖြစ်ရပ်မှာ Trump ဆန့်ကျင်သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်ခါတလဲလဲ။ သူမကဒီအလေးပေးလေ့ရှိတယ်တဲ့စကားပြောအချက် Khans အပေါ် Trump ရဲ့နှုတ်တိုက်ခိုက်မှုရွှေကြယ်မိသားစုနှင့်အငြင်းအခုန်နေစဉ်အတွင်းသည်သူ၏ပေါက်ကွဲထွက်ပါဝင်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအီးမေးလ်အားနည်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုသိပ်မရှိပါကအမေရိကန်နိုင်ငံ၏တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဟီလာရီသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းဟီလာရီသည်နာမည်ကျော်များစွာသောသူမအားထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီး Lebron James, Jay-Z နှင့် Beyonce နှင့် Katy Perry တို့ပါဝင်သည့်စုဝေးပွဲများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ လေဒီဂါဂါနှင့်ဂျွန်ဘွန်ဂျိုဗီတို့ကကလင်တန်ရောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်လူအုပ်ကိုသိမ်းပိုက်ထားသည့်ကြီးမားသည့်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းမပြုမီ Gaga သည်သမိုင်းကိုမြင်ခွင့်ရရန်မည်မျှအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကိုမပြောမီအီတလီလူမျိုးများမှမွေးဖွားလာသည့်အသက် ၃၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူမိသည်။ ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး Madam သမ္မတ!
ထိုအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသောထောင်နှင့်ချီသောကျောင်းသားများအနက်များစွာသောသူတို့ကယခင်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနကကျောင်းသားများအပေါ်ထားရှိသောသူမ၏ကတိကဝတ်ကိုထပ်မံအတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ညကဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်အဓိကအချက်များရရှိခဲ့သည်ဟုများစွာသောသူတို့ကဆိုကြသည်။ ကလင်တန်ကထပ်ခါတလဲလဲပြောကြားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရယ်စရာကောင်းသောကျောင်းသားများ၏ကြွေးမြီပြproblemနာကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့်လူတိုင်းအတွက်ကောလိပ်ကိုတတ်နိုင်အောင်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Trump အခိုင်အမာဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးစဉ်အလားတူအစီအစဉ်ကင်းမဲ့။
သမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်၏မှတ်ချက်များသည်ကလင်တန်နှင့်သူမ၏မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအကြောင်းပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအမျိုးသမီးကဲ့သို့မည်သူမျှတွေ့ဆုံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူမအမေနှင့်စတင်တွေ့ဆုံခြင်းမပြုပါကသူသည်လူစုလူဝေးထဲမှထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏သမီးချယ်လ်ဆီးသည်လည်းသူတို့စင်ပေါ်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးပထမဆုံးမိသားစု၏ပြန်လည်ပါဝင်မှုကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဟီလာရီကလင်တန်သည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အရေးအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သောအကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်၌နောက်ဆုံးမိနစ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျင်းပခြင်းဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကိုပြသခဲ့သည်။ NC သို့အမြန်ပြန်လာခြင်းအားဖြင့် (ထိုအချိန်တွင်အလွန်အရေးကြီးသော Wake ခရိုင်ရှိ) ငယ်ရွယ်သောလစ်ဘရယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏မဲဖြင့်တိုးတက်မှုကိုရရန်မျှော်လင့်သည်။
Sierra Stanford မှဓာတ်ပုံများ။